Xiisadda Mareykanka iyo Iiraan: Shan arrimood oo laga fahmay khudbaddii Trump - BBC News Somali
Xiisadda Mareykanka iyo Iiraan: Shan arrimood oo laga fahmay khudbaddii Trump
9 Jannaayo 2020
Image caption Trump ayaa sheegay in Iiraan ay dib u dagtay
Habeenimadii ay Iiraan gantaallo 10 ka badan la dhacday saldhigyo ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin dalka Ciraaq, iyagoo ka aargoosanaya dilkii ay Washington u geysatay janaraalkii Iiraan ee Qassem Suleimani, Donald Trump wuxuu bartiisa Twitter-ka kusoo qoray in "wax walba ay hagaagsanaayeen".
"Iiraan waxay u muuqataa inay gadaal u dageyso, waana arrin u fiican dhammaan dhinacyada ka walaacsan xaaladdan waliba waxay u wanaagsan tahay caalamka".
Su'aasha uu qof walba isweydiinayay markii ay gantaallada Iiraan dhaceen waxay ahayd waxa xigi doona ee uu Mareykanku sameyn doono.
"Dilkii aan ku fulinnay Soleimani, wuxuu ahaa farriin culus oo aan u dirnay argagixisada: Haddii aad naftaada qiimeyneysid, looma baahna inaad halis galisid nafta dadka kale".
Wuxuu hadalkiisa diiradda ku saaray sababta loo dilay Soleimani - oo ahaa "ninka ugu sarreeyay argagixisada adduunka", waa sida uu Trump hadalka u dhigaye - iyo waliba in dilkiisa uu ahaa mid mar hore loo baahnaa.
"Soleimani gacmihiisa waxaa ka dareerayay dhiigga dadka Mareykanka ah iyo kuwa Iraan labadaba", ayuu yiri, isagoo sharraxayay sida uu u taageeri jiray kooxaha uu Mareykanku ugu yeero argagixisada.
"Gantaalladii xalay nalagu soo riday annaga iyo xulafadeennaba waxaa kharashkooda bixiyay maamulkii hore ee ugu dambeeyay".
Madaxda Maraykanka iyo jahwareerka sharciyadda dagaalka
Trump oo bixiyay jawaabtii la wada sugayay ee aargoosiga Iiraan
Image caption Aaskii loo sameeyay taliyihii Iiraan ee lala dilay Soleimani
"Maanta, waxaan isbahaysiga NATO ka codsanayaa inay ku lug yeeshaan arrimaha ugu badan ee bariga dhexe".
"Inta aan anigu madaxweyne ka ahay Mareykanka, Iiraan waligeed looma oggolaan doono inay yeelato hubka nuclear-ka".
Lama oga in uu Trump faa'iido siyaasadeed ka heli karo xiisaddan cusub ee ka dhex aloosantay Iiraan iyo Mareykanka, iyadoo la ogyahay in sanadkan dhammaadkiisa ay dhaceyso doorashada madaxtinnimada ee uu loollanka adag ku wajihi doono.